Oromoo 75'tu mootummaa Itoophiyaan ajjeefame, jedha HRW - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Oromoo 75’tu mootummaa Itoophiyaan ajjeefame, jedha HRW
Woraana ummata irratti bobbaasuun haalicha daran hammeessa jedha HRW
Hiriira mormii maaster pilaanii Finfinnee irratti woraanni mootummaa yoo xiqqaate Oromoo 75 ajjeese jedha gabaasni Human Rights Watch (HRW). Humni woraanaa fi poolisiin mootummaan Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti bobbaase, akka gabaasa HRW kanaatti, ummata hiriira baye irratti jumlaadhaan dhukaasuudhaan heddus madeessaniiru.
‘Tankaarfiin mootummaan Itoophiyaa kanniin hiriira bayan irratti fudhate galaafatamniinsa lubbuu namoota hedduufi dhangala’iinsa dhiigaaf sababa ta’eera,’ jette Leslie Lefkow itti-aantuun HRW koonyaa Afrikaa. Itti dabaluudhaanis, ‘Mootummichi ummata nagaan shororkeessitoota jechuu fi humna woraanaa bobbaasuun isaa haala boorayaa kana daran hammeesse,’ jette.
Human Rights Watch woraanni mootummaa ummata hiriira irra jirutti, wolumatti qabee, dhukaasuu isaa mirkaneeffaneerra jedha. Dhukaasa jumlaa kanaan namoonni heddu, keessumattuu naannoo Shawaa Lixaa fi Wollagaatti, ajjeefamanii daandii irratti akka sa’aa dheeraaf dagatamaniiru.
Ragaan HRW wolitti sassaabe woraanni mootummaan ummatatti bobbaase halkaniin jiraattota manaa guuraa kan reebuu fi hidhatti guuru ta’uu isaa mirkaneesse. Hojjattoonni mootummaa, ogeeyyiin fayyaa fi barsiistonni heddus hidhamaniiru. Achi buuteen namoota hedduus kan hin beekamne ta’uus gabaasni kuni saaxila.
Mootummaan Itoophiyaa ummata hiriira nagaa bayeen shororkeessitoota jechuu fi kan tankaarfii gara-jabeenyaa irratti fudhatu ta’uu ibsuun niyaadatama. Mootummichi gama isaatiinis namoonni ajjeefamanii fi madaayan jiru jedheera. Garuu, hanga ammaatti meeqa akka ta’aniifi bakka itti ajjeefaman tuquu hin uggine. Kana godhuu dadhabuun amanamummaa oduu isaanii gaafii keessa seensisa. Ummata nagaa ajjeesuu waan murteesseef oduu akkanaa akka sababaatti dhimma itti baya kanniin nuun jedhan jiru.
Mootumaan Itoophiyaa mirga ummanni yaada ufii ibsachuu fi hiriira mormii geggeefachuu qabu kabajuun akka irra jiru HRW akeekkachiisa.
Gochi garajabeenyaa mootummaan Itoophiyaa Oromoo gaafii haqaa gaafatan irratti raawwate kallattii hedduu balaaleffatamaa jira. Mootummaan Ameerika dhimmichi isa yaachisuu ibsee, mootummaan harka isaa akka sassaabbatus waamicha godheera. Jaarmayaaleen mirga namaaf falmanis ajjechaa raawwatame balaaleffataa jiru. Miidiyaaleen addunyaas dhimma kana irratti barreessuu eegalaniiru.
Previous articleMootummaan Ameerikaa ajjeechaan Oromoo irra gayaa jiru yaachisaadha jedha
Next articleBlood and terror on the streets as protests grip Ethiopia|AFP